Umthetho wobumfihlo, Ukuvikelwa kwamalungelo obumfihlo
Ubumfihlo lilungelo eliyisisekelo futhi livumela bobabili abantu nezinkampani ukulawula idatha yazo. Ngenxa yokwanda kwemithetho nemithetho yaseYurophu kanye nezwe kanye nezilawuli eziqinile zokuhambisana nokutholwa ngabaphathi, izinkampani nezikhungo akunakuziba kakhulu umthetho wobumfihlo kulezi zinsuku. Isibonelo esaziwa kakhulu semithetho nemitheshwana cishe yonke inkampani noma isikhungo okufanele sihambisane nayo yi-General Data Protection Regulation (GDPR)…
NGESIDINGO SOMLENGISI WOKUQESHWA?
Ubumfihlo lilungelo eliyisisekelo futhi livumela bobabili abantu nezinkampani ukulawula idatha yazo.
> Ibanga lohlelo kanye nokugada
> Inventory nenqubomgomo yobumfihlo
> Umthetho Wokuvikelwa Kwaziswa Okujwayelekile (GDPR)
Ngenxa yokwanda kwemithetho nemithetho yaseYurophu kanye nezwe kanye nezilawuli eziqinile zokuhambisana nokutholwa ngabaphathi, izinkampani nezikhungo akunakuziba kakhulu umthetho wobumfihlo kulezi zinsuku. Isibonelo esaziwa kakhulu semithetho nemitheshwana cishe yonke inkampani noma isikhungo okufanele sihambisane nayo yi-General Data Protection Regulation (GDPR) eyaqala ukusebenza kulo lonke i-European Union. ENetherlands, imithetho eyengeziwe ibekwe kuMthetho Wokusetshenziswa Kwe-GDPR (UAVG). Umnyombo we-GDPR ne-UAVG ulele eqinisweni lokuthi yonke inkampani noma isikhungo esisebenza ngemininingwane yomuntu siqu kufanele siphathe le mininingwane yomuntu siqu ngokucophelela nangokusobala.
Yize ukwenza inkampani yakho i-GDPR-proof kubaluleke kakhulu, kuyinkimbinkimbi ngokomthetho. Noma ngabe iphathelene nedatha yamakhasimende, idatha yabasebenzi noma idatha evela kubantu besithathu, i-GDPR ibeka izidingo eziqinile maqondana nokucubungulwa kwemininingwane yomuntu uqobo futhi iqinisa namalungelo abantu imininingwane yabo icutshunguliwe. Law & More abameli bayazi konke ukuthuthuka maqondana (noshintsha njalo) umthetho wobumfihlo. Abameli bethu bahlola indlela ophatha ngayo imininingwane yomuntu uqobo bese ubeka imephu izinqubo zakho zangaphakathi nokucutshungulwa kwedatha. Abameli bethu babuye babheke ukuthi inkampani yakho ihlelwe ngokwanele kangakanani ngokuya ngomthetho osetshenziswayo we-AVG nokuthi yikuphi ukuthuthuka okungabakhona. Ngalezi zindlela, Law & More uyajabula ukukusiza wenze futhi ugcine inhlangano yakho i-GDPR-proof.
Ngokwazisa kwe-AVG, imithetho iqinisiwe. Ngabe inkampani yakho isilungele lokhu?
Isikhulu Sokuvikela Idatha
Sikusiza ukuqoka Isikhulu Sokuvikelwa Kwedatha
Ukuhlolwa Komthelela Wokuvikelwa Kwedatha
Singaqhubeka nokuhlaziya ukubona izingozi ezihambisana nokuqhutshwa kwemininingwane yakho
Iyiphi idatha inkampani yakho esebenza ngayo? Ngabe iyacubungula e-AVG? Sisenkonzweni yakho
ngokushesha kwacaca kimi
ukuthi Law & More ine
uhlelo olucacile lokusebenza ”
Ibanga lohlelo kanye nokugada
I-GDPR isebenza kuzo zonke izinhlangano ezisebenzisa idatha yomuntu siqu. Lapho inkampani yakho iqoqa idatha umuntu angabonakala ngayo, inkampani yakho ihlobene ne-GDPR. Ngaphezu kwalokho, imininingwane yomuntu uqobo iyacutshungulwa lapho, ngokwesibonelo, ukuphathwa kwabasebenzi okugcinwayo kugcinwa, ukuqokwa kwamakhasimende kubhaliswa noma lapho imininingwane yezokunakekelwa kwempilo ishintshwa. Ungase futhi ucabange ngalezi zimo ezilandelayo: ukuqhuba imisebenzi yokumaketha noma ukukala noma ukubhalisa ukukhiqiza kwabasebenzi noma ukusetshenziswa kwekhompyutha. Ngokubheka okungenhla, akunakugwemeka ukuthi inkampani yakho kufanele ibhekane nemithetho yobumfihlo.
ENetherlands, umgomo oyisisekelo ukuthi umuntu kufanele akwazi ukuthembela ezinkampanini nasezikhungweni ukuphatha idatha yabo ngokunakekela. Ngemuva kwakho konke, emphakathini wethu wamanje, ukwenziwa kwe-digitization kudlala indima ebaluleke kakhulu futhi kufaka phakathi ukucubungula idatha ngedijithali. Lokhu kungaholela ezingcupheni ezinkulu maqondana nokuvikela ubumfihlo bethu. Kungakho umphathi ongumqondisi wobumfihlo waseDashi, i-Datha Yezokuvikelwa KweDatha, enamandla amakhulu okufika nokusebenzisa. Uma inkampani yakho ingahambisani nomthetho we-GDPR osebenzayo, khona-ke ibeka ngokushesha umyalo ngokuya ngezinkokhelo zenhlawulo yesikhathi esithile noma inhlawulo enkulu, engafinyelela kuma-euro ayizigidi ezingamashumi amabili. Ngaphezu kwalokho, esimweni sokusetshenziswa ngokungakhathali kwedatha yomuntu siqu, inkampani yakho kufanele icabangele ukwenzeka okubi komphakathi nezenzo zesinxephezelo yizisulu.
Inventory nenqubomgomo yobumfihlo
Ukuze uvikele imiphumela efinyelela kude noma izinyathelo ezivela kumphathi, kubalulekile ukuthi inkampani noma izikhungo zakho zibe nenqubomgomo yobumfihlo ukuze zithobele i-GDPR. Ngaphambi kokuhlanganisa inqubomgomo yobumfihlo, kubalulekile ukusungula ukuthi inkampani noma isikhungo sakho senza kanjani esimweni sobumfihlo. Yingakho Law & More udwebe icebo elilandelayo ngesinyathelo:
• Isinyathelo 1: Khomba ukuthi iyiphi idatha yomuntu siqu oyicubungulayo
• Isinyathelo 2: Thola injongo kanye nesisekelo sokucutshungulwa kwedatha
• Isinyathelo 3: Nquma ukuthi amalungelo ezihloko zedatha aqinisekiswa kanjani
• Isinyathelo 4: Hlola ukuthi ucela futhi kanjani, uyithola futhi ubhalisa imvume
• Isinyathelo 5: Nquma ukuthi uphoqelekile yini ukwenza Ukuvikelwa Komthelela Wokuvikelwa Kwedatha
• Isinyathelo 6: Nquma ukuthi ungaqoka yini iSikhulu Sokuvikelwa Kwedatha
• Isinyathelo 7: Nquma ukuthi inkampani yakho isebenza kanjani nokuvuza kwedatha kanye nesibopho sokubika
• Isinyathelo 8: Hlola izivumelwano zakho zomprosesa
• Isinyathelo 9: Nquma ukuthi iyiphi umphathi wakho engena ngaphansi kwayo
Lapho usuwenzile lokhu kuhlaziywa, kungenzeka ukunquma ukuthi iziphi izingozi zokwephulwa kwemithetho yobumfihlo eziqhamuka enkampanini yakho. Lokhu kungabhekelwa nenqubomgomo yakho yobumfihlo. Ngabe ufuna ukuxhaswa kule nqubo? Sicela uxhumane Law & More. Abameli bethu abangochwepheshe emkhakheni wezomthetho wobumfihlo futhi bangasiza inkampani yakho noma isikhungo ngamasevisi alandelayo:
• Ukweluleka futhi uphendule imibuzo yakho yezomthetho: ngokwesibonelo, kunini lapho kwephulwa idatha futhi ubhekana kanjani nayo?
• Ukuhlaziya ukucubungulwa kwedatha yakho ngezinhloso nemigomo ye-GDPR futhi kutholakale izingozi ezithile: ingabe inkampani noma isikhungo sakho siyathobela iGDPR futhi yiziphi izinyathelo zomthetho okusadingeka uzithathe?
• Ukulungiselela nokubukeza amadokhumenti, afana nenqubomgomo yakho yobumfihlo noma izivumelwano zomprosesa.
• Ukwenza Ukuhlolwa Komthelela Wokuvikelwa Kwemininingwane.
• Ukusiza ekuqhubekeni kwezomthetho nezinqubo zokuphoqelelwa yi-AP.
Umthetho Wokuvikelwa Kwaziswa Okujwayelekile (GDPR)
• Okwamanje, umthetho wobumfihlo uthola ushintsho olukhulu olususelwa ekuqalisweni kwe-GDPR. Ngokusungulwa kwe-GDPR, lonke i-European Union lizoba ngaphansi komthetho ofanayo wobumfihlo. Lokhu kunomthelela omkhulu kumabhizinisi, ngoba kuzofanele abhekane nezidingo ezinzima mayelana nokuvikelwa kwedatha. I-GDPR ithuthukisa isikhundla sezifundo zedatha ngokunikeza amalungelo amasha nokuqinisa amalungelo ayo asunguliwe. Ngaphezu kwalokho, izinhlangano ezisebenzisa idatha yomuntu siqu zizoba nezibopho eziningi. Kubalulekile ukuthi izinkampani zilungiselele lolu shintsho, ikakhulukazi njengoba izinhlawulo zokungalandelani i-GDPR nazo zizoba nzima.
Ngabe udinga izeluleko maqondana nenguquko eya kwi-GDPR? Ngabe ufuna ukuba kuhlolwe ukutholwa, ukuze uqiniseke ukuthi inkampani yakho ihambisana nezidingo ezitholakala ku-GDPR? Noma ukhathazekile ngokuvikela imininingwane yakho uqobo? Law & More inolwazi olubanzi oluphathelene nomthetho wobumfihlo futhi luzokusiza ukuthi uhlele inhlangano yakho ngendlela evumelana ne-GDPR.
Bese usithinta ngocingo +31 (0) 40 369 06 80 we-stuur een e-mail naar: